Puntland Archives - Page 2 of 21 - Sawirrotv
Madaxweynaha Maamulka Puntland oo Maanta ka soo Degay Magaalada Gaalkacyo (SAWIRRO)
April 12, 2017 – Madaxweynaha maamulka Puntland mudane, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay degaanada Puntland, isagoo kasoo degey magaalada Gaalkacayo ee xarunta gobolka Mudug. Madaxweyne gaas ayaa ka soo kicitimay magaalada Dubai ee dalka Imaaraddka Carabta, waxaana Madaxweynaha iyo Wefdigiisa garoonka dayuuradaha ee Cabdulaahi …
Madaxweyne Gaas oo ka Hadlay Heshiiska Dekedda Boosaaso Loogu Wareejiyay Shirkadda DP-World (Dhagayso)
April 07, 2017 – Madaxweynaha Puntland mudane, C/wali Maxamed Cali (Gaas) ayaa maanta ka hadlay heshiiska Maamulka puntland uu la galay shirkadda DP-world, kaasi oo dhigaya in Dekadda Boosaaso lagu wareejiyo shirkadaasi DP-world. Waxa uuna sheegay madaxweynuhu in uu rajeynayo Mashruucan in uu noqdo mid dhab ah oo si deg deg ah loo bilaabo, isaga oo …
Maamulka Puntland oo Heshiis la Saxiixday Shirkadda CCECC (Akhriso)
March 31, 2017 – Golaha Wasiirada ee maamulka Puntland oo shalay kulankoodii qamiislaha ahaa isugu yimid magaalada Garoowe ayaa ansixiyey heshiis maamulka Puntland uu la galay shirkad ka soo jeeda dalka Shiinaho oo ka shaqeysa dhismooyinka. Shirkaddan oo lagu magacaabo China Civil Ingnineering Construction Corp. ayaa horey heshiiskan ula saxiixatay madaxweyne C/weli Gaas oo ku …
Madaxweynaha Puntland oo Maanta Daahrogay Nidaamka Siyaasada Xisbiyada Badan (SAWIRRO)
March 25, 2017 – Madaxweynaha Puntland mudane C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta si ramsi ah u daah furay furashada Ururrada xisbiyada siyaasada iyo nidaamka xisbiyada badan ee Puntland. Xaflada Furitaanka ayaa waxaa Madaxweynaha ku wehelinaayey gudoonka Baarlamaanka, masuuliyiin ka tirsan goloyaasha maamulka Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland, ururada bulshada rayidka ah, siyaasiyiin, Isimo, …